Slack ဘို့ပေါင်းစည်းရေး Google Ads | ချိတ်ဆက်ပါကြော်ငြာများနှင့် Slack
clever ads Slack နှင့်အတူလော့ဂ်အင်လုပ်ပါ
Slack များအတွက်ပေါင်းစည်းမှု Google Ads Microsoft ကကြော်ငြာ &amp; Facebook ကကြော်ငြာ
သင့်အကောင့် '' စွမ်းဆောင်ရည်နှငျ့ပတျသကျသောဂရပ်များ & မက်ထရစ်ကိုရယူလိုပါသည်
Clever Ads များ၏အကျိုးကျေးဇူးများ
Google Ads ၊ Bing ကြော်ငြာများနှင့် Facebook ကြော်ငြာမက်ထရစ်များကိုတစ်နေရာတည်းတွင်တွေ့မြင်ခြင်းအားဖြင့်အချိန်ကိုသက်သာစေသည် tab တစ်ခုလျော့နည်းနိုင်သည်။
ဒီအက်ပ်ကမက်ထရစ်၊ ဂရပ်များနှင့်အနှစ်ချုပ်များဖြင့်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေး၏တိုးတက်မှုကို Slack ချက်တင်တွင်တိုက်ရိုက်ခြေရာခံစေသည်။
ငွေပေးချေမှုလိုအပ်သောစျေးကွက်ရှိအလားတူကိရိယာများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက Clever Ads သည်သင်၎င်းအတွက်သုံးရန်အခကြေးငွေမပေးချေ။
Google Ads ၊ မိုက်ကရိုဆော့ဖ်ကြော်ငြာများနှင့်ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ကြော်ငြာများကိုသင်စိတ် ၀ င်စားပြီးသူတို့၏စွမ်းဆောင်နိုင်မှုဆိုင်ရာမက်ထရစ်များနှင့်ဂရပ်များကိုလက်ခံရရှိသည်။
သင့်ကိုယ်ပိုင်ဒက်ရှ်ဘုတ် Access ကို
သင်၏ကိုယ်ပိုင် dashboard Slack သင်၏မက်ထရစ် ကို Slack မှတစ်ဆင့်ရယူလိုသည့် ပုံစံကိုစိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ပါ ။ သင်စိတ်ဝင်စားဆုံးသောကြော်ငြာအကောင့်ကို စစ် ထုတ်ပြီးသင်၏ အစီရင်ခံစာများကို စီစဉ် ပါ။
အဘယ်ကြောင့် Clever Ads Slack အက်ပလီကေးရှင်းကို install?
Google Ads ၊ ထင်မြင်ချက်များ၊ ပြောင်းလဲမှုများ၊ ကလစ်များကဲ့သို့သောသင်၏ဂူဂဲလ်ကြော်ငြာများ၊ မိုက်ကရိုဆော့ဖ်ကြော်ငြာနှင့် Facebook ကြော်ငြာစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးစွမ်းဆောင်ရည်များနှင့်ပတ်သက်သောအရေးကြီးသောမက်ထရစ် Slack စာတွင်တိုက်ရိုက်ရရှိနိုင်သည်။
သင်ရွေးချယ်ထားသောကြော်ငြာအကောင့်အသစ်များ၏သင်နှစ်သက်တဲ့မက်ထရစ် (ဆွဲဆောင်မှု, ကုန်ကျစရိတ်စကားဝိုင်း, etc) ၏ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ကိုတွေ့မြင်ရန်ဂရပ်ဘို့ကိုမေးပါ။ စကားကိုသွားသည်နှင့်အမျှပုံတစျထောငျစကားလုံးများကိုကျိုးနပ်သည်။
သင့်ရဲ့မက်ထရစ်အကျဉ်းချုပ်သည်သင်၏အသင်းအဘို့ထိုသူတို့အများပြည်သူစေခြင်းသို့မဟုတ်တိုက်ရိုက်သတင်းစကား option ကိုရွေးချယ်ခြင်းအားဖြင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကသူတို့ကိုစောင့်ရှောက်ရန်နေ့စဉ် / အပတ်စဉ်သင်နှစ်သက်တဲ့ channel မှာရယူရန်။
ရိုးရိုးရှင်းရှင်းစာတိုပေးပို့ခြင်းဖြင့် Google Ads သို့မဟုတ် Facebook Ads နည်းဗျူဟာများကိုမည်သို့တိုးတက်အောင်လုပ်ရမည်အကြောင်းအကြံဥာဏ်များတောင်းခံပါ။ မတူညီတဲ့စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးအမျိုးအစားတွေထည့်ခြင်း၊ စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးဘတ်ဂျက်ကိုညှိခြင်း (သို့) စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးရဲ့ရည်မှန်းချက်ကိုပြုပြင်ခြင်းစတဲ့အရာတွေကိုကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
Clever Ads Slack အက်ပ်ကိုထည့်နိုင်သည်
သာ4ခြေလှမ်းများ
app ကို Install
အဆိုပါ Add Clever Ads မှ app ကို Slack သည် "မှ Add ပေါ်နှိပ်ခြင်းအားဖြင့် Slack button ကို" ။
သင်၏ Google ကို အသုံးပြု. အတွက် log, Microsoft, နှင့် / သို့မဟုတ် Facebook အကောင့်ကိုသင့်ရဲ့ကြော်ငြာအကောင့်ဆက်စပ်။
သင့်ရဲ့တပ်မက်လိုချင်သောအကောင့်ကို Select လုပ်ပါနှင့်မည်သည့်အချိန်ကသင့်ရဲ့အများအပြားအကောင့်များအကြားသို့ပြောင်းပါ။
app ကိုအများဆုံးထုတ် Make
Slack bot အားအကျဉ်းချုပ်များ၊ ဂရပ်များစသဖြင့်မေးမြန်းခြင်းဖြင့်အစီရင်ခံစာများစတင်ပါ။
ဒီ app ကိုအတိအကျအဘယ်သို့ပြုရပါသနည်း?
ဤအက်ပလီကေးရှင်း၏ရည်ရွယ်ချက်မှာသင်၏ဘဝကိုပိုမိုလွယ်ကူစေရန်နှင့်သင်ကြိုက်နှစ်သက်သော“ နံနက်ခင်းကော်ဖီသောက်ရန်သင့်အားအချိန်အလုံအလောက်သက်သာစေလိုသည်” ဖြစ်သည်။ သင်နှင့်သင် Google Ads အကောင့်ကိုချိတ်ဆက်လိုက်သည်နှင့်မက်ဂလစ်နှင့်ဂရပ်များကိုသင်၏ Slack သို့မဟုတ် Microsoft Teams chat တွင်တိုက်ရိုက်စာပို့ခြင်းဖြင့်ရိုးရိုးလေးစာပို့ခြင်းဖြင့်စတင်နိုင်သည်။ Google Ads interface ကိုနေ့တိုင်းဝင်ရောက်စရာမလိုသည့်အတွက်သင်၏အဖိုးတန်အချိန်ကိုချွေတာသည်။
မက်ထရစ် & ဂရပ်များ Google Ads အကောင့်များ၏ထင်မြင်ချက်များ၊ ပြောင်းလဲမှုများ၊ ကလစ်များစသည့်အရေးကြီးသောမက်ထရစ်များနှင့်ဂရပ်များသည်သင်၏ချက်တင်တွင်သင်တိုက်ရိုက်ရရှိနိုင်ပါသည်။
စီစဉ်ထားသောအစီရင်ခံစာများ ။ သင်၏မက်ထရစ်ကိုသင်၏အသင်းအတွက်လူသိရှင်ကြားဖြစ်စေရန်သို့မဟုတ်တိုက်ရိုက်မက်ဆေ့ခ်ျရွေးခြင်းအားဖြင့်သင်ကိုယ်တိုင်သိမ်းထားရန်သင်၏မက်ထရစ်ကိုနေ့စဉ်သို့မဟုတ်အပတ်စဉ်လက်ခံရရှိသည်။
သိကောင်းစရာများ - ရိုးရှင်းတဲ့စာတိုပေးပို့မှုမှတဆင့် Google Ads မဟာဗျူဟာကိုဘယ်လိုတိုးတက်အောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတာကိုအကြံဥာဏ်များတောင်းခံပါ။ မတူညီတဲ့စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးအမျိုးအစားတွေကိုပေါင်းထည့်တာ၊ မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးအတွက်ဘတ်ဂျက်ကိုညှိတာ၊ စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးရဲ့ရည်မှန်းချက်ကိုပြုပြင်တာတွေစတာတွေကိုပြောနိုင်ပါတယ်။
မကြာမီသတိပေးချက်များ Google Ads အကောင့်များနှင့်ပိုမိုလုံခြုံမှုရှိပါစေ။ Clever Ads 'bot သည်သင်၏အကောင့်တွင်ပုံမှန်မဟုတ်သောအရာတစ်ခုရှိပါကသင့်အားအကြောင်းကြားလိမ့်မည်။
ဒီ app ကို 100% အခမဲ့ပါ!
Google Ads ကိုဘာကြောင့်ချိတ်ဆက်ဖို့လိုသလဲ Google Ads အကောင့်?
ဤအက်ပ်ကိုမှန်မှန်ကန်ကန်လည်ပတ်နိုင်ရန်အတွက်သင်၏ Google Ads အကောင့်မှအချက်အလက်လိုအပ်သည်။ လုံခြုံရေးရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ဂူဂဲလ်ကသင်၏မက်ထရစ်ကိုပုံမှန်အားဖြင့်မည်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်ကိုမှခွင့်မပြုပါ။ ထို့ကြောင့်သင့်ခွင့်ပြုချက်လိုအပ်ပါသည်။ Adwords စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးများကိုစီမံခြင်း" ဟုခေါ်သည့် Google Ads အကောင့်ကိုအနိမ့်ဆုံးအဆင့်သတ်မှတ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သည်။ ၎င်းသည်သင်၏မက်ထရစ်ကိုစစ်ဆေးရန်နှင့်ဇယားများနှင့်အနှစ်ချုပ်များကိုသာကျွန်ုပ်တို့ခွင့်ပြုရန်တစ်ခုတည်းသောခွင့်ပြုချက်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်၏ Google Ads ကိုလုံခြုံစွာထားနိုင်ပါသလား Google Ads အကောင့်?
ဒါဟာ 100% လုံခြုံပါတယ်! Clever Ads သည်ဂူဂဲလ်၏မိတ်ဖက်တစ် ဦး ဖြစ်သည်။ ဤခေါင်းစဉ်ကိုရရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဂူဂဲလ်၏အမြင့်ဆုံးစံနှုန်းများနှင့်စံနှုန်းများကိုပြည့်မီရမည်။ နှစ်များတစ်လျှောက်ငါတို့တီထွင်ထုတ်လုပ်ခဲ့သည့်အမျိုးမျိုးသောကုန်ပစ္စည်းများသည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း ၁၅၀,၀၀၀ ကြားတွင်နာမည်ကောင်းရခဲ့သည်။
ဘယ်လိုအကြှနျုပျ၏ data တွေကိုဘေးကင်းလုံခြုံထားရှိမည်သလဲ?
သင်၏ဂူဂဲလ်အကောင့်သို့ဆိုင်းအင်ဝင်သည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်ကျွန်ုပ်တို့၏စာဝှက်ထားသောဒေတာဘေ့စ်ထဲ၌ဝင်ရောက်ခွင့်အမှတ်အသားကိုကျွန်ုပ်တို့သိမ်းဆည်းထားသည်။ သော့ကို Clever Slack သို့မဟုတ် Microsoft Teams နှင့်မျှဝေခြင်းမပြုပါ။ Google Ads ကြော်ငြာမှသက်ဆိုင်ရာဒေတာများကိုရရှိသောအခါ၎င်းကို Slack သို့မဟုတ် Microsoft Teams မက်ဆေ့ခ်ျအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲသွားသည်။ သင်ကသင်ရိုက်ထည့်လိုက်သောစကားဝိုင်းအတိုင်းပြန်ပို့သည်။
၎င်းသည်အတွင်းဖြစ်သောဖြစ်စေ၊ ဂူဂဲလ်၊ Slack ၊ ဖြစ်စေ Microsoft Teams ဖြစ်စေစာတိုတိုင်းကို TLS 1.2 (Transport Layer Security) သုံး၍ စာဝှက်ထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် HTTPS protocol ဖြင့်သာဆိုဒ်များကို ၀ င်ရောက်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဆုံးမှသင်ကျွန်ုပ်တို့ကိုခွင့်ပြုချက်ပေးထားပြီးမှ Google Ads မည်သည့်အခြေအနေမျိုးတွင်မဆိုကျွန်ုပ်တို့သည်သတ်မှတ်ထားသောအပြင်ဘက်ရှိအချက်အလက်များကိုရယူရန်ခွင့်ပြုထားပါသည်။
သငျသညျဒီ app ကို အသုံးပြု. မဆိုဒုက္ခရှိခြင်းပါသလား?
assistant@cleverads.com သို့အီးမေးလ်ပို့ခြင်းဖြင့်ဖြစ်စေ၊ အောက်ပါပုံစံကိုဖြစ်စေဖြည့်ခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
သည်းခံပါ! တစ်စုံတစ်ခုမှားယွင်းခဲ့သည်။ ထပ်ကြိုးစားပါ။